ဝါဝါဝင်းရွှေ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝါဝါဝင်းရွှေ (၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၄၃ မွေးဖွား)သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု သုံးကြိမ် ရရှိခဲ့သော မြန်မာ အမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဝါဝါဝင်းရွှေသည် မြန်မာ့ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်မှာ စီးပွားရေးအရ အအောင်မြင်ဆုံး မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူ ဖြစ်သည်။
၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၄၃
ဦးသန်းထွဋ် (m. 1971)
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု (၃ ကြိမ်)
၂ ရုပ်ရှင်လောကသို့ ရောက်ရှိခြင်း
ဝါဝါဝင်းရွှေကို ဦးထွန်းရွှေနှင့် ဒေါ်သန်းတင်တို့က ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အငယ်ဆုံးသမီး ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်မက်သဒစ် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် စိတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို စတင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သူမသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းရာကျော်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သူမသည် ချစ်သမီး (၁၉၆၅)၊ ချောင်းကိုပစ်၍ မြစ်ကိုရှာ (၁၉၇၉)နှင့် မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ဆန္ဒ (၁၉၇၉) ဇာတ်ကားတို့ဖြင့် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုကို သုံးကြိမ်ရရှိခဲ့သည်။ဒေါင်ဒေါင်မြည်တဲ့အသည်းရုပ်ရှင်ကားတွင်သူမ၏ဇာတ်ကောင် 'ဘဲဥမ' ကာရိုက်တာကိုပရိတ်သတ်ကအထူးတလည်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်။အကယ်ဒမီနှင့်လွဲချော်ခဲ့သော်လည်းပရိတ်သတ်အားပေးမှုအထူးတလည်ရရှိခဲ့ပြီး ထိုဇာတ်ကားမှဝါဝါဝင်းရွှေ၏ ဆံပင်ကေကို အမျိုးသမီးပုရိတ်သတ်များကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပြီး 'ဘဲဥမကေ'ဟုနာမည်ကြီးခဲ့သည်။သူမ ပထမဦးဆုံး ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့သော"ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်"ဇာတ်ကားသည် အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ပြီးသူမနှင့်အတူဇာတ်ကားထဲတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သောမင်းသားဦးညွှန့်ဝင်းသည် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။သူမအတွက်လည်းအကယ်ဒမီတစ်ကြိုပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။၁၉၈၅ခုနှစ်တွင်သူမရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်ခဲ့သော"မယ်မင်းကြီးမ"ကားတွင်လည်း ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ်၏အကယ်ဒမီတစ်ကြိုပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ဝါဝါဝင်းရွှေ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ရန်ကုန်မြို့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင်လည်း စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိခဲ့သည်။ ဝါဝါဝင်းရွှေသည် ဆုထူးပန်ရုပ်ရှင်ရုံ၏ ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်ရုံအား အထပ် ၁၄ ထပ်ပါ ကွန်ဒိုမီနီယမ်အဖြစ် ဆောက်လုပ်ရန် Great Father Land ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနှင့် ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖက်မှ အဆိုပါနေရာတွင် ဝါဝါဝင်းရွှေအား အင်းချကာ အောက်လမ်းနည်းဖြင့် စီရင်ခဲ့သည်ဟု ဝါဝါဝင်းရွှေက ပြောဆိုခဲ့ကာ နှစ်ဖက် မပြေလည်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကျပ် ၁.၂ ဘီလီယံ ပေးချေရန် စာချုပ်မှ နောက်ဆုတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ကုမ္ပဏီက ဝါဝါဝင်းရွှေအား စွပ်စွဲခဲ့ကာ ဇွန်လတွင် အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်ဇူလိုင်လတွင် Father Land ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက တရားစွဲဆိုမှုကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
ဝါဝါဝင်းရွှေသည် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော သန်းထွဋ်နှင့် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ဝင်းထွဋ်ဝင်းနှင့် ဝါဇင်အမည်ရှိ သားနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ သူမသည် ကိုးကန့်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သော အိုလစ်ဖ်ယန်းနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်ဟု ကောလဟာလယူဆခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Yan Pai 2011.
↑ Noe Noe Aung 2012.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Zon Pann Pwint 2013.
↑ Zon Pan Pwint 2013.
Yan Pai။ "Privatization Linked to Money Laundering"၊ The Irrawaddy၊ 23 March 2011။ 14 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Noe Noe Aung။ "Great Father Land waits on building permits"၊ Myanmar Times၊9July 2012။ 14 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Zon Pann Pwint။ "Actress in court over black magic claims"၊ Myanmar Times၊ 1 July 2013။ 14 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Zon Pan Pwint။ "Father Land Construction withdraws suit against actress"၊ Myanmar Times၊ 15 July 2013။ 14 December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝါဝါဝင်းရွှေ&oldid=738943" မှ ရယူရန်
၂၄ မတ် ၂၀၂၂၊ ၁၆:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။